I Nimroda, zafiafin’i Noa, no iray tamin’ireny olona ireny. Lehilahy ratsy izay nihaza ary namono biby sy olona izy io. Nanao ny tenany ho mpanjaka koa i Nimroda, ary nanapaka teo amin’ny olona. Tsy tian’Andriamanitra i Nimroda.
Tsy nankasitrahan’i Jehovah Andriamanitra io fanorenana io. Nirin’Andriamanitra ny hifindran’ny olona toerana sy ny hipetrahany manerana ny tany rehetra. Nefa hoy ny olona: ‘Andeha isika hanorina tanàna iray sy tilikambo iray avo be ka ny tampony hahatakatra ny lanitra. Dia hahazo laza isika!’ Naniry voninahitra ho an’ny tenany ny olona, fa tsy ho an’Andriamanitra.
Koa dia nataon’Andriamanitra izay hampitsaharan’ny olona ny fanorenana ilay tilikambo. Fantatrao ve ny fomba nanaovany izany? Tamin’ny fampitenenana tampoka ny olona, fiteny samihafa, fa tsy iray monja. Tsy nifankahazo resaka intsony ireo mpanorina. Izany no antony niantsoana ny tanànan’izy ireo hoe Babela, na Babylona, izay ny heviny dia hoe “Fikorokoroana.”
Nanomboka nifindra toerana avy ao Babela izao ny olona. Ireo antokon’olona nampiasa fiteny mitovy dia niara-nipetraka tany amin’ny faritra hafa teto an-tany.
Hizara Hizara Nanorina Tilikambo Lehibe Iray ny Olona
my tant. 12